I-BEIJING-Abalawuli baseTshayina bathathe amanyathelo amatsha okomeleza ulawulo lwezinto ezikhutshelwa ngaphandle kunye nemigaqo elawula ukuphuma kwayo ukunceda ngcono umlo wehlabathi ngokuchasene nesifo se-coronavirus senoveli (COVID-19).
I-China iza kukhulisa ukubeka iliso kuthumelo lokuthumela ngaphandle kwemaski yobuso ngaphandle kokuhlinzwa, ekufuneka ifezekise imigangatho esemgangathweni yelizwe lase China okanye amanye amazwe ahambele ngaphandle aqala ukusukela ngeCawa, ngokwendlela edibeneyo yokuphuma kwi-Ministry of Commerce (MOC), kuLawulo Jikelele Ngeziqhelo kunye noLawulo lukaRhulumente kuLawulo lweNtengiso.
Abathumeli ngaphandle bemaski yobuso bengaphangeli kufuneka bafake isibhengezo esidibeneyo somthumeli ngaphandle kunye nomngenisi ngaphakathi xa beya kugxothwa ngokusesikweni ngenjongo yokuqinisekisa ukuba bakwimigangatho kwaye abayi kusetyenziselwa iinjongo zoqhaqho, ngokomgaqo-nkqubo omtsha.
I-kn95 yimaski eqinisekiswe ngumgangatho we-China wokudambisa umoya wokuphefumla. Ilingane nenqanaba lokhuseleko le-n95, kodwa lilandela kuphela imigangatho yovavanyo yamazwe ahlukeneyo. Makhe sijonge ukusetyenziswa kwee-masks ezingama-9595.